I-anthology yetyuwa: ileta evulekileyo yokulibala | Uncwadi lwangoku
Uncwadi lwangoku | | Inqaku labahleli, Ababhali, Imibongo, Ezahlukeneyo
Unxweme lwasePunta de Piedras
Anthology yeTyuwa ngumsebenzi wokugqibela wombongo wombhali waseVenezuela uJuan Ortiz. Sisihloko soqulunqo olubandakanya zonke ingqokelela zakhe zemibongo-ezisithoba, ukuza kuthi ga ngoku-kunye nencwadi engapapashwanga: Isibongo sam, impazamo. Okokugqibela ngakumbi, umbhali uchukumisa imbonakalo yobomi malunga neziganeko zobhubhane emva kwamava akhe anzima ne-Covid-19.
Ngexesha lomsebenzi wakhe, u-Ortiz ukwagqwesile nakwezinye iindidi zoncwadi, ezinje ngeenoveli, amabali amafutshane kunye nezincoko.. Namhlanje, usebenza njengomkhupheli kunye nomhleli, ukongeza ekubeni ngumdali womxholo wee-portals ezifana Lifeder, uncwadi lwangoku, Iingcebiso zokuBhala i-Oasis kunye namabinzana Imibongo eyongezelelweyo.
1 I-anthology yetyuwa, ileta evulekileyo eya ekulibaleni (2021)
1.1 Inqaku lomhleli
1.2 Intshayelelo yencwadi
1.3 Ubume bomsebenzi
1.4.1 I-Salt Cayenne (2017)
1.4.1.1 Inombolo yombongo "XXVI"
1.4.2 Ilitye leTyuwa (2018)
1.4.2.1 Umbongo "X"
1.4.3 Indlu ebendikuyo, idolophu ebendihlala kuyo (2018)
1.4.3.1 Umbongo "X"
1.4.4 Ibhedi (2018)
1.4.4.1 Umbongo "XXIV"
1.4.5 Ngomntu kunye namanye amanxeba ehlabathi (2018)
1.4.5.1 Isiqwenga sombongo "XIII"
1.4.6 Iyavuselela (2019)
1.4.6.1 Umbongo "XV"
1.4.7 UAslyl (2019)
1.4.7.1 Umbongo "XLII"
1.4.8 Imizimba elunxwemeni (2020)
1.4.8.1 Umbongo othi "Ukuba ndithethe neengelosi"
1.4.9 IMatria Ngaphakathi (2020)
1.4.9.1 Umbongo "XXII"
1.4.10 Isibongo sam, i-equivocation (2021)
1.4.10.1 Umbongo "Sasineentanda ezine"
2 Malunga nombhali, uJuan Ortiz
2.1 Ukuzalwa kunye nezifundo zokuqala
2.2 Izifundo zaseyunivesithi
2.3 Umsebenzi wokufundisa kunye neempapasho zokuqala
3 Isebenza nguJuan Ortiz
Anthology yeTyuwa, ileta evulekileyo eya ekulibaleni (2021)
I-Salt Anthology, ileta evulekileyo yokulibala (2021) sesona sihloko sika-Ortiz samva nje. Yincwadi yakhe yokuqala eshicilelwe kumazwe ngamazwe emva kokufudukela eBuenos Aires, Argentina, ngo-2019. Umsebenzi uye wabonakala kwifomathi yokuzipapasha kunye nenkxaso ye-Letra Grupo Editorial seal. Ngale ncwadi, u-Ortiz ufuna ukunika indawo yokudibanisa kwindalo yakhe ebanzi yeembongo, engeyincinci, kuba sithetha ngeembongo ze-800.
Ngokutsho komhleli wayo, uCarlos Caguana: “Anthology yeTyuwa ingaphezulu kakhulu kwe-10 kwimisebenzi enye, izahluko ezili-10 zobomi bembongi iziswe kumazwi ngolwimi lwaselwandle oluhle olukhumbulayo nolulangazelelayo, olulangazelela imihlaba yalo enetyuwa, kwaye lucula uthando, ukulibala, ubukho, intswela-bulungisa, nawuphi na umbandela onokwenzeka ochaphazela ukuhamba kwawo kula mazwe, kwaye u-Ortiz wenza ukusuka umbono ocacileyo, onobubele nonamandla ”.
Umsebenzi ufumana intshayelelo ebanzi nepheleleyo ebhalwe ngu Imbongi yaseVenezuela uMagaly Salazar Sanabria —Ilungu elihambelanayo leVenezuelan Academy of Language yeState of Nueva Esparta. Kwimigca yakhe, umbhali odumileyo uyacalula aze azihlalutye nzulu iincwadi nganye nganye equlethwe kwisihloko, ukukhupha izigxeko ezichanekileyo ukusuka kumbono obanzi wombongo.
Phakathi kwamanqaku kaSalazar Sanabria, kuyacaca: “… oku kubhala kugcina isimo sokuziphatha phakathi kweziseko zayo. Amagama agcina isidima esiwagcinayo ngenxa yokuba kukho uxanduva ngenyaniso, inkululeko kunye nokunyaniseka ngomsebenzi wembongi, wombhali ”. Kwakhona le mbongi igqabaza isithi: “Kwiindinyana zikaJuan Ortiz siyabubona ubuntu beemvakalelo zakhe, ezibuhlungu, yaye sizibona ngokucacileyo ngolwimi, apho kuviwa amandla osizi, ukungakwazi ukuzinceda nosizi.
Njengoko bekutshiwo ekuqaleni, le ncwadi yingqokelela yeencwadi ezilishumi ezithi zona zibe zizahluko. Ezi zezi: Ityuwa ye-cayenne (2017) Ilitye letyuwa (2018) Ibhedi (2018) Indlu (2018), Ngomntu kunye namanye amanxeba ehlabathi (2018) Iyavuselela (2019) UAslyl (2019) Imizimba elunxwemeni (2020) Matria ngaphakathi (2020) kunye Isibongo sam, impazamo (2021).
Nangona icandelo ngalinye linomxholo walo, ubukho bezinto zaselwandle kwindawo nganye kubo buyamangalisa. Ityuwa, ulwandle, amaqokobhe, abalobi, iimarera, iirancherías… into nganye eselunxwemeni inendima engenakuyihoya. Umzekelo ocacileyo woku ubonakaliswa ngumbongo obhalwe ngasemva kwincwadi:
"Nini awusabhali ngetyuwa »
Xa ndingasabhali ngetyuwa
kwaye umhlaba wolwandle uyaphaphazela ezandleni zam.
bamba usiba lwam.
Ukuba i-inki ayinyangekanga,
ayiyi kungcamla njengonxweme,
ilizwi lakhe aliyi kuma kwaphela;
Ndiya kuba ndiphulukene nomgca wemijelo,
ubugcisa obufunekayo bemarera,
Umdaniso omangalisayo wentlaninge yeentlanzana.
Ityuwa ye-cayenne (2017)
Lo msebenzi imele ukungena ngokusesikweni kombhali kwihlabathi lemibongo. Nangona wabhala imibongo ukususela malunga no-2005, yonke loo mibhalo yahlala ingapapashwa de kube ngoko. Isihloko sithi ibhalwe kwiprozi yesihobe kuphela kwaye imibongo ayinagama, ibalwe nje ngoonobumba bamaRoma - into eya kuxhaphaka kwezinye iincwadi zakhe.
Nangona kungekho metric echaziweyo, kukho isingqisho kunye nenjongo kumbongo ngamnye. Ayibhalelwanga nje ukubhalwa, kodwa kukho injongo esuk’ entliziyweni kwindinyana nakwisitanza ngasinye. Imidlalo yezafobe enzulu enezinto ezininzi ezingaziwayo inokuxatyiswa eya kukhokelela umfundi ukuba aphinde acinge kwakhona umbongo ngamnye ngokuphindaphindiweyo.
Ulwandle netyuwa, njengakuyo yonke incwadi yababhali, banendima enkulu kwesi sahluko. Bahamba kunye nothando, kodwa kungekhona ngothando oluqhelekileyo kunye nesiphelo sepinki, kodwa egcwele umdla kunye nokulibala.
Inombolo yombongo "XXVI"
emangcwabeni amaqokobhe eperile;
apho imibuzo yewaka lemizimba ilala
kwaye iimpendulo azindwendweli.
Sachukunyiswa sisimumu sekorale;
ilanga leperile kwingqameko
nendawo yokusabela iminatha elinde umsebenzi esityeni.
Ndikwajonge ukuqhekeka kwiqhwithi,
umsantsa odibanisa yonke into,
ikhonkco elidibanisa izithuba,
iindledlana ezaphukileyo elunxwemeni,
ndide ndidinwe nokuba uvele xa ndingakulindeli.
Ilitye letyuwa (2018)
Kwesi sahluko sesibini, ityuwa iyaqhubeka, uthando oluntsonkothileyo, izafobe, imifanekiso, ulwandle. Umfazi uba likhusi kwilolo, kodwa nokuba kunye, umntu akayeki ukuba yedwa. Kukho ulangazelelo oluzele yizalelo phakathi kweevesi, imbalelwano efinyeziweyo efuna isithuba sezithuba zenzeke.
Nangona kunjalo, ngaphandle kothando olumangalisayo olunokuvakala, Ukulibala akuyeki ukuzibonakalisa njengesivakalisi, njengenyani elindele yonke into enegama. Iprozi isekho njengolwimi lwesihobe, kodwa isingqisho kunye nenjongo azishiywanga kwindawo nganye, igama ngalinye.
Inkcukacha kukuba andiyi kunyanzelisa.
ebusuku neentaka zabo zenzolo;
ngendlela abafudukela ngayo emnyango wam
ndaza ndadibanisa iifestile zam.
nezikhonkwane ziya kuqhuba izaqhwithi ngolwimi lwabo lweeperile;
Iindlela zaselwandle ziya kususa ukunyathela kwakho ematyeni azo
nentlaka yegama lakho iya kukhukuliswa emke emazanjeni;
Ndiza kubhala kwaye kubonakala ngathi ndiyakukhumbula,
Le yindlela endilibala ngayo.
Indlu endandikuyo, idolophu endandihlala kuyo (2018)
Kule meko, indlu kamama nedolophu—iPunta de Piedras—ngabo baphambili. Iprozi isekulwimi oluqhelekileyo, kwaye oku Ihonjiswe ngemifanekiso yemveli yolo nxweme yabona imbongi ikhula kunye nezo ndonga zazikhusela ubuntwana bakhe kunye nobutsha bakhe. Umbhali ugxininisa ngokukhethekileyo kubalinganiswa bakhe, kunye neenkolelo ezithandwayo ezityebisa ukuhamba kwakhe kwezo ndawo zetyuwa.
Iqaqambisa ubufutshane beevesi nezitanza kunye nendlela ezithungelana ngayo njengebali, ukusuka ekuqaleni ukuya ekupheleni. Indlu, ngokwayo, yinto ephilayo ecinga ngabo bahlala kuyo, ukuba uvakalelwa, uyazi, kwanokuba nguye ogqibayo ukuba ngubani ophilayo nongaphiliyo.
Ngaphandle kwemvula imanzisa yonke into,
tyhala ubusuku egumbini lam.
Kukho into endixelelayo,
okanye mhlawumbi ndifuna undixelele into.
Ukwazi ukuba ilizwi lakho lihamba ngantoni,
Ngokuqinisekileyo ndiyawasela amanzi
kwaye ugqibe kweli cala
yintoni ekufuneka ihlanjwe ngaphakathi.
Kwiincwadi zikaJuan Ortiz, oku, mhlawumbi, eyona nkanuko yazo zonke. Inkanuko ikhona kwivesi nganye ngendlela ebukhali, hayi ilize isihloko somsebenzi. Njengakwicandelo elingaphambili, ubufutshane bemibongo bugcinwa, kwaye kwiindawo zabo ezincinci inyani epheleleyo, ihlabathi, indibano iyenzeka.
Abanye banokuyibona le ngqokelela imfutshane yemibongo njengenoveli emfutshane kakhulu, apho umbongo ngamnye ubalisa izahluko zothando olufutshane kodwa olunzulu —Okwakunokuba bubomi kubo. Ngokuqinisekileyo, akukho kunqongophala kwemidlalo yamagama, imifanekiso ecebisayo.
ukuze ibe yi-horizon.
Omnye uya phaya
kusongela kwaye kuba mnyama indlela ubomi obusemva ngayo
lide liphele ihlabathi.
Ngomntu kunye namanye amanxeba ehlabathi (2018)
Esi sahluko sigqame ngokuba ngqongqo kolwimi lwembongi. Yona, ngokwayo, i-catharsis, isikhalazo ngokuchasene neentlobo kunye nokuhamba kwayo okutshabalalisayo kwiplanethi. Nangona kunjalo, kukho iinzame ezimfutshane zolamlo apho ungenelelo lobukho bobuthixo bucelwa ukubona ukuba isiphithiphithi sobukho siyalungiselelwa na kancinane.
Iprozi ikhona kwintetho ephoxayo yombongo ngamnye. Imifanekiso eboniswayo iqatha, ibonakalisa ubunyaniso obuqatha koko umntu akubiza ngokuba yimbali.
Isiqwenga sombongo "XIII"
Yonke into imalunga nokutsha,
Indlela yomlilo otyhutyha egazini lethu,
ocinezela imihlathi yeeperile zide zicole iziseko zisigudise esinqeni;
ukuzihlambulula emzimbeni emzimbeni,
sacinywa ukuba netyala kangangokuba sibe zizipili,
kwaye ngaphezulu kuka-Oktobha kuza kugcwala ebusika.
Lo mnombo ngumlomo ovulekileyo weenguqu ezingapheliyo;
hamba uyohlafuna, yile nto uze kuyo,
Hamba umise umoya
weluka iminatha ekhanyayo ebonisa iiOlympians ezidlulayo ze-egos ezininzi eziphakamayo.
Andizange ndifune ukuba ngumdaka weentsuku kweli phupha.
Ingakanani into endiya kuyihlawula kwingqekembe yokunyaniseka - eyona nto ibiza kakhulu - ukuba yingca entle yedlelo elizolileyo kwaye ndihambe kungekudala,
Ndize kukrazula imimoya esixhenxe yehlabathi kunye nohlanga lwam.
Kule ncwadi, ngelixa intetho yeprozi iqhubeka, njengetyuwa kunye nolwandle, kukho ugxininiso kwinkalo yokudlala. I-evocative-njengoko u-Ortiz ebabiza ngayo-beza kubumba isihobe ngasinye kwizinto zomhlaba wabo, ukusuka kwiSiqithi saseMargarita. Ukususela kwizinto zaselwandle ukuya kwizinto ezisemhlabeni, amasiko kunye nabalinganiswa.
Isicatshulwa nguJuan Ortiz
Ukufezekisa oku, umbhali usebenzisa ingcaciso emfutshane kodwa ebambekayo yento ebuhobe. Isivuseleli ngasinye sivala ngegama lento, into okanye ubume obubhekisa kuso, ngoko ke sinokuthetha ngombongo obuyela umva ocela umphulaphuli ukuba aqikelele ukuba kuthethwa ngantoni phambi kokuba ivesi yokugqibela iveze.
Umkhwa wakhe ugubungela
uphelelwa lilizwi kwakhona.
Lo ngumsebenzi wokuvalelisa, njengoko ubhalwe phambi kokunduluka kwembongi kweli lizwe. I-Nostalgia iphezu komhlaba, ukuthanda umhlaba, indawo yolwandle engayi kubonwa de ingaziwa ukuba nini.. Njengakwizahluko ezingaphambili, iprozi ixhaphakile, njengoko kunjalo ngamanani esiRoma endaweni yezihloko.
Ulwimi lwe inkanuko ayiyeki ukubakho, kwaye idityaniswe kakhulu ne-regionalist kunye ne-costumbrista cadres.. Ukuba sithetha ngokuzisola kumsebenzi ka-Ortiz, esi sihloko siqulethe enye yezona zinto zibalulekileyo: ezibangelwa kukufuduka.
Bendijonge ukuhamba kakuhle.
Ukushiya bubugcisa obuthi,
ukuba yenziwe kakuhle, iyamangalisa.
Ukunyamalala njengoko bekufanele ukuba kufike,
ubuncinane intaka yokukhanya.
Ukuhamba ngolu hlobo, ngequbuliso,
Ndinexesha elinzima kuyo.
okanye ifestile, akukho ndawo ndihamba kuyo,
apho aphuma khona ubonakala eze
endimema ukuba ndibuyise inkunkuma eyadini,
kwaye ndihlala apho, phakathi kwento,
njengokuxolelwa phambi kokufa.
Imizimba elunxwemeni (2020)
Esi sahluko sohlukile kule miba mibini iphambili ikhankanywe apha ngasentla: imihobe inesihloko esingeso-amanani umbhali usondela kancinci kwiimetrics zemveli kunye nezicengcelezo. Nangona kunjalo, iprozi isabambe indawo ephambili.
Isihlokwana esithi "Imibongo yokungafanelanga naphina" sibhekisa kwinto yokuba le ncwadi iqokelela inxalenye enkulu yemibhalo ethe saa yombhali ukusukela ekuqaleni kwakhe njengembongi, nokuba "ayingenanga" kwezinye iincwadi zesihobe ngenxa yemixholo yazo eyahlukeneyo. . Nangona kunjalo, xa uhlolisisa imigca yesi sihloko Ingundoqo ecacileyo ye-Ortiz kunye neempawu ezishiywe ngabantu bakhe kunye nobuntwana bakhe kwiingoma zakhe ziyaqhubeka nokubonwa.
Umbongo othi "Ukuba ndithethe neengelosi"
Ukuba ndithethe nezithunywa zezulu njengoBawo,
Ngendanditsibela iincopho emva kwamehlo
enze amapasi ngerhamncwa esikulo.
Ukuba bendisazi kancinci iilwimi zabagqithileyo,
ulusu lwam luya kuba lufutshane,
kwaye ugqobhoze kwiintsimbi ezishinyeneyo;
njengelizwi likaThixo xa libiza ezintliziyweni zabantu.
Kwaye kukuba ndisemnyama
ndimamele u-Epreli otsibela emithanjeni yam,
mhlawumbi zii-gannets endandikhe ndanazo ngegama,
okanye uphawu lwembongi endilimele kakhulu kuyo, indikhumbuza ivesi yayo yamabele ahamba ze namanzi angapheliyo;
Kodwa ukuba kuya kuba mnyama, ndiqinisekile ukuba ndiya kuhlala ndinjalo
yaye ilanga liya kundikhangela kamva ukuze ndilungise imicimbi
kwaye ndiphinde ndiphinde kwisithunzi esixela kakuhle okwenzekayo emva kwesifuba;
qinisekisa imisele yexesha,
lungisa umthi kwiimbambo;
uluhlaza esazulwini sesibindi;
into eqhelekileyo kwijometri yobomi.
Ukuba nje bendiza kuthetha neengelosi njengoko ubawo esenza,
kodwa kusekho unobumba kunye nendlela,
shiya ulusu lutyhilekile
kwaye ungene nzulu ebumnyameni ngenqindi eliqinileyo, elityheli,
ngelanga kumnqamlezo ngamnye ngolwimi lwabantu.
Matria ngaphakathi (2020)
Esi sicatshulwa sesinye sezona zikrwada zaseOrtiz, ezinokuthelekiswa kuphela Ngomntu kunye namanye amanxeba ehlabathi. En Matria ngaphakathi umzobo wenziwa weVenezuela apho kwafuneka emke ukuya kufuna ikamva elingcono losapho lwakhe, kodwa ukuba, kungakhathaliseki ukuba angazama kangakanani na, akamshiyi.
Ukubalwa kwamanani kwamaRoma kuyaphinda kuthathwe kuba umbongo ngamnye sisahluko esincinci apho iprozi ibuya yongamela. Ithetha ngobomi bemihla ngemihla benyani eyaziwa lihlabathi lonke, kodwa icingelwa ngabambalwa; ukulamba nobuvila, ukulahlwa, ukudakumba kunye neendlela zakho ezimnyama ziyatsalwa, kwaye indlela ekukuphela kwayo yokuphuma kukuwela imida apho unikezelo luvumela khona.
Iingqayi ezingenakubalwa zokuhambisa ukungabikho,
imifanekiso emidala ukukhumbula into ehambileyo,
ukuzivalela ngaphakathi kwindawo eyimfuneko, ukulibala okucwangcisiweyo,
phuma ngamaxesha athile ukuze ubone ukuba yonke into yenzekile,
kwaye uphinde inkqubo ukuba kusemnyama ngaphandle.
Uninzi lwethu alukwazanga ukulandela ifomula,
Ngoko saba zizikhwenene, sathunga amaphiko egazini
kwaye sahamba ngeenqwelomoya ezithe saa ukubona ukuba kuyasa ngaphaya kocingo.
Isibongo sam, impazamo (2021)
Oku kukuvalwa kwencwadi, kwaye kuphela komsebenzi ongapapashwanga okhoyo kuyo yonke i-anthology. Iimpawu zesicatshulwa imibongo yemixholo eyahluke kakhulu kwaye u-Ortiz ubonisa ukuphatha kwakhe ngeendlela ezahlukeneyo zemibongo. Emva koko, Nangona i-predilection yakhe ye-prose idume kakubi, uphatha uninzi lweendlela zemibongo yeCastilian ngendlela efanelekileyo kakhulu., njenge-spinel yeshumi, i-sonnet okanye i-quatrains.
Isibongo sam, impazamo ivela emva kwesahluko esinzima kakhulu kubomi bombhali: ukusinda kwi-Covid-19 kunye nosapho lwakhe kwilizwe lasemzini nasekhaya. Amava awayephila ngexesha losulelo ayengekho mnandi kwaphela, kwaye kukho imibongo emibini eyivakalisa ngendlela enamandla.
Imbongi iphinde iculwe ngokunyanisekileyo kubahlobo abamkileyo. Nangona kunjalo, akusiyo yonke into eyintlekele kweli candelo, ubomi, ubuhlobo kunye nothando nazo zibhiyozelwa, ngakumbi lowo uvakalelwa yintombi yakhe uJulia Elena.
Umbongo "Sasineentanda ezine"
saba ziintanda ezine;
kwabakho izaphulelo kumagama,
ikota nganye yayililizwe lobuzwilakhe,
Amanyathelo kwakufuneka anyanyekelwe kakuhle kakhulu ukuze angayi emfazweni.
Le yindlela ubomi obasenze ngayo:
lukhuni, njengesonka semihla;
omile, njengamanzi epompo;
Nangona kunjalo, ngaphandle kokungqongqo kwezithuba,
ukuya kwimida yemimandla eyomeleleyo,
Umphetho ngamnye oqhekekileyo uhambelana ngokugqibeleleyo nolandelayo,
bathi bakuhlanganisana bonke.
etafileni, phambi kwesitya semini;
kwaye sasilusapho ngokwenene.
Malunga nombhali, uJuan Ortiz
Ukuzalwa kunye nezifundo zokuqala
Umbhali uJuan Manuel Ortiz wazalwa ngoDisemba 5, 1983 kwidolophu yasePunta de Piedras, kwiSiqithi saseMargarita, kwiphondo laseNueva Esparta, eVenezuela. Ungunyana wembongi uCarlos Cedeño kunye noGloria Ortiz. Kuloo dolophu elunxwemeni loLwandle lweCaribbean wafunda inqanaba lokuqala kwisikolo samabanga aphantsi iTío Conejo, imfundo esisiseko kwiSikolo saseTubores kunye. Wathweswa isidanga seSayensi kwiLa Salle Foundation (2000).
Emva kwexesha funda Isidanga kwisayensi yekhompyuter kwi-Universidad de Oriente Nucleo Nueva Esparta. Nangona kunjalo, emva kweminyaka emithathu, wacela utshintsho lomsebenzi kwi-Integral Education, isigqibo esasiza kuphawula indlela yakhe yobomi. Kwiminyaka emihlanu kamva yamkelwa ngokukhankanywa kuLwimi noNcwadi (2008). Ngeli xesha, waphuhlisa ubuchwephesha begitare ezifundweni, eza kuthi kamva zimkhonze kakhulu kumsebenzi wakhe.
Umsebenzi wokufundisa kunye neempapasho zokuqala
Akazange ayifumane idegree yakhe yabandakanywa ngu-Unimar (iYunivesithi yaseMargarita) kunye waqala umsebenzi wakhe wokuba ngunjingalwazi waseyunivesithi. Apho wasebenza njengomfundisi weencwadi, imbali kunye nobugcisa, ukususela ngo-2009 ukuya ku-2015. Kamva, u-Unearte (iYunivesithi yezoBugcisa) waxutywa, apho wafundisa iiklasi zokuvisisana ezisetyenziswa kwigitare kunye nokusebenza kwezixhobo. Ngelo xesha wayekwasebenzisana njengombhali wephephandaba Ilanga likaMargarita, apho wayenendawo ethi "Transeúnte" kwaye uqala "ukuvuka kwakhe" ngopapasho lwakhe lokuqala: Emlonyeni weengwenya (inoveli, 2017).
Usuku ngosuku, bhala uphononongo lwee-portals Uncwadi lwangoku, Isikhokheli ebomini, Iingcebiso zokubhala i-Oasis y Amabinzana kunye nemibongo kwaye usebenza njengomvavanyi iimpazamo kunye nomhleli.
Isebenza nguJuan Ortiz
Emlonyeni weengwenya (inoveli, 2017)
Ityuwa yaseCayenne (2017)
Indlu endandihlala kuyo yidolophu endandihlala kuyo (2018)
Unxweme olungcwele (i-poetic anthology, 2018)
Umhambi (ukuhlanganiswa kwamabali asuka kuluhlu lwe ILanga likaMargarita, 2018)
Amabali avela kwisikhalo (Amabali awoyikisayo, 2020)
Anthology yeTyuwa (2021)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » I-Salt Anthology, ileta evulekileyo yokulibala
Iingoma kunye neentsomi zikaBécquer
Blacksad. Yonke into iyawa, nguJuanjo Guarnido kunye noJuan Díaz Canales. Uphononongo